Sida lacag loogu deeqo arooska: hadiyadaha asalka ah ee asalka ah
Sidee baan kuugu deeqaa arooska?
Hadiyadaha lacageed ee arooska - bandhigida ugu haboon ee dhalinyarada. Ku saabsan noocyo kale oo hadiyado ah waxaad halkan ka akhrisan kartaa. Dhinaca kale, uma baahnid inaad ka fekerto waxa ay lamaanuhu jecel yihiin, tan kale, ka dib marka ay tahay kharashka ku baxa arooska xaddiga lacageed kasta oo lacag ah ayaa noqda caawimo. Waxaa muhiim ah oo keliya in la go'aamiyo inta uu le'eg yahay. Marka hore, waa in lagu hagaa heerka isdhexgalka. Qaraabada iyo waalidiintuba had iyo jeer way ka dhiibtaan dhammaantood, jaaliyadaha ayaa isku dari kara sumcad siman. Marka labaad, ballaaran ee baaxadda ee arooska, hadiyado badan oo la filayo ayaa la filayaa. Go'aaminta qadarka aad rabto inaad ku rido baqshadda, ha ilaawin miisaaniyaddaada, laakiin ha noqoto mid daalan.
Waxa kaliya oo ay tahay inay bixiso lacag asaasi ah. Waxaad samayn kartaa xirmo aan caadi ahayn ama sameeyn kartid baqshi ahaan, akhri gabayo sharaf leh-hambalyo ama xitaa u soo bandhig dadweynaha lambarka oo idil, dhammaadka kaas oo lammaanuhu heli doonaan hadiyad daa'in ah. Haddii hibo aan weli kuu soo booqan, markaas waxaan diyaar u nahay in aan la wadaagno fikradaha aan caadiga ahayn.
Habka ugu fudud ee lagu heli karo hadiyaddii asalka ahaa ee asalka ahaa waa inaad si caadi ah u rakibtid. Waa kuwan dhowr fursadood oo hal abuur leh:
Waxaad ku dhejin kartaa biilasha, ku xiran tuubo oo ku xiran xabo sanduuq. Newlyweds way jeclaan lahayd haddii aad adigu sameyso, tusaale ahaan, farsamada xargaha. Fursad khafiif ah: qaado 5 ama 6 sanduuq oo kala duwan, si ay midba midka kale ugu habboonaadaan. Qaybta sare ku qor: "Hadiyadani waa ...". Ka dib marka ay dhalinyaradu kor u qaadaan daboolka, muuqaalkooda ayaa ka muuqan doona qoraallada soo socda: "TV ama ...". Iyo sidoo kale on sanduuqa ugu yar ee dhamaadka.
Soo iibso weel quraarad weyn, ku qor: "Miisaaniyadda qoyska" iyo qurxin qurux badan. Buuxi hoosta macmacaanka, iyo biilasha dusha sare.
Waxaad si aad ah ula yaabi doontaa martida arooska, haddii aad samayso miro lacag caddaan ah. Waxa ugu muhiimsan waa in la helo biilal dheeraad ah.
Internetka waxaad ka heli kartaa fursado badan oo aad ku iibsan karto farmamyada. Laga soo bilaabo mabaadi'da dharka aroosadda iyo dharka arooska, dhejiska, kolajooyinka iyo xitaa garoonada dareenka ah ayaa la sameeyaa.
Hadiyad qurux badan oo calaamad ah waa geed geed. Ma aha oo kaliya nasiib wacan, laakiin sidoo kale dakhliga dhabta ah. Si aad u sameysid, waxaad u baahan doontaa dheriga, xargaha xayawaanka ah, dhagaxyada yaryar, xayawaanka, dharka maqaarka, koolada iyo lacagta. Xayawaanku waxay isku dhafan yihiin si ay u sameeyaan geedka, buunshaha "lagu beeray" gudaha isbuunyo, waxay ku dhacdaa dheri, waxaana lagu daboolaa qumaatiirta (waxay noqon kartaa mid yar oo khafiif ah). Warqadaha ayaa lagu dhejiyaa laanta iyadoo la adeegsanaayo dharka wax lagu duubo.
Poems for hadiyadaha arooska: lacag
Marka lagu daro baakidhka quruxda badan, waxaad ku soo qaadan kartaa gabayo qurux badan oo taabasho leh rabitaan. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan hambalyo iyo rabitaan arooska waxaa laga heli karaa halkan .
Hadiyadaha waa kala duwan yihiin
Qofkasta wuu riyoodaa
Wixii nolosha ee soo saartay puzzles
Siinta waxbarasho waa muhiim!
Kordhi riyadii xadka
Doorashadu hadda waa adiga!
Halkan waxaa ku qoran liiska bogga oo buuxa
Maxaad naftaada ku riyootay?
Markaad fiiriso baqshadda,
Ganacsi farxad leh ...
Go'aanso, iibso, isku daydaa?
Awood u lahaan kara inaad u isticmaasho geesinimo!
Sidaa daraadeed waa wax cajiib ah
Waad fududaan kartaa!
Samee hadiyad, si diirran u xir -
Dhammaan wixii hadda ka tagay!
Noloshu ha noqoto guul, nasiib,
Jacayl iyo saaxiibtinimo qurxin ...
Sidoo kale waxaan doonayaa lacag badan -
Sidoo kale ma faragalinayaan!
Aayaadka aad la socotaan hadiyad ahaan, sharaxaad ka bixi doorashadaada. Isku day inaad liisto waxa cusub ee dhawaan la iibsan karo.
Waxaan ahay qallafsan,
Waxa aad ku siineyso,
Sidee ayaad ku qosli kartaa.
Oo waxaan go'aansaday inaan ku siiyo lacag,
Si aad ugu iibsato farxad naftaada,
Biilashan sixir ah,
Waxay ku siin doonaan nolol ka couture.
Gabayo xiiso leh oo ku saabsan lacag ayaa kaa caawin doonta inaad u aragtid daawadayaasha.
Markaas ayuu ku dhacaa, ka dibna sara kaco,
Ha u oggolaan in geeddi-socodkani uu ku khuseeyo adiga.
Waxay siin doontaa "alwaax"
Laakiin maaha sidaas, waxaan ka baqayaa inaad fahmi doonto.
Doolarku hadda wuu u fiican yahay qof walba
Iyo in Russia uu noqday suurad wacan!
Baqshiish loogu talagalay lacag loogu talagalay arooska
Dhaqan ahaan, lacagta arooska waxaa lagu siiyaa bashqad. Waxay noqon karaan naqshado kala duwan oo leh daabacaad la daabacay. Si aad u sameysid hadiyad aad xasuusato, waxaad samayn kartaa bashqad aad arooskaada adigoo gacmahaaga ah. Si aad tan u samayso, waxaad u baahan doontaa shaanbi daabacan internetka, qalab jajab ah, qalin qori ah iyo qadiimi ah, warqad qurxan oo qurux badan, quraarado iyo walxaha qurxinta.
Goobo daaqada oo ka jar qaybta shaqada kaadhka.
Isku geyn baqshada isku midka ah ee waraaqda lagu duubo, ka tago 2 cm gunnooyinka.
Kaarka ku dabool warqadda.
Foomka iyo jilbaha baqshadda.
Baqshadaha guriga lagu raaxaysto waa fiican yihiin, sababtoo ah waxay kuu oggolaanayaan inaad muujisid fikrada naqshadeeye. Bedelkii warqad, waxaad isticmaali kartaa dhar iyo qurxin nooc nooc oo kale ah, waxaad heli doontaa baqshado jinsiyado xiiso leh.
Farsamooyinka kaydka waa mid aad u caan ah, gaar ahaan macnaha arooska. On baqshadda cad, waa ku habboon tahay in ay eegaan xargaha ama ubaxyo ubax qurux badan.
Farsamaynta kaydka, waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameysid baqshiish lacag loogu talagalay qaab kale, ku qurxin sawirada cusub ee cusub ama guntinta funny ee ka soo baxa wargeysyada. Waxay ku xiran tahay dhadhankaaga iyo qaabka arooska.
Ma u qalantaa in la soo gabagabeeyo heshiiska guurka
Diyaarinta arooska, waxa aad u baahan tahay inaad ogaato
Dharka Wedding for gabdhaha oo dhan
Abaabulka xafladaha bachelorka - fikradaha iyo talada
Fun at arooska - ciyaaraha iyo tartanka
Xulashada salaan iyo salaanta ugu fiican ee arooska
Sidee si dhakhso ah uga takhalusi dhibco mugdi ah sanka
Khataraha sigaar-cabista dhallinyarada
Uurkii haweeney soddon sano kadib
Ka saarista leysarka timaha ee saarista timaha
Sidee loo doortaa kabo qumman oo loogu talagalay ilmo
Digaag leh suugo zucchini
Maxay yihiin calaamadaha mucjiso iyo calaamadaha macnahoodu?
Maraq kareem khudradeed leh broccoli
Goorma ayaan u baahanahay inaan bilaabo cadayga ilkaha?
Egotisk Thailand iyo faa'iidooyinka masaajeynta Yoga
Xilliga hore ee menopause: daaweynta iyo nafaqada
Sidee looga gudbi karaa cabsida waqtiga uurka?
Jam ka soo tubta
Ilmaha oo ka soo jeeda khatarta prikorma
Ilmuhu wuxuu lahaa ilkaha ugu horeeya
Sida loo siiyo gargaarka degdegga ah ee lagu xoqayo shchitovidki
Faallooyinka Carbon ee shabakadaha bulshada: Dadkani ma fuulaan jeebka si erayga :)))